Otu esi etinye Discord na Pop!_OS 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye Discord na Pop!_OS 20.04
October 29, 2021 October 29, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Discord na APT Manager
Ụzọ 2. Wụnye Discord na Snap (Snapcraft)
Usoro 3. Wụnye Discord na Flatpak
Otu esi ebido onye ahịa Discord
Nsogbu bụ ngwa mkparịta ụka olu, vidiyo na ederede efu nke ọtụtụ iri nde mmadụ ndị gbara afọ 13+ ji na-akpakọrịta na ndị obodo na ndị enyi ha. Ndị ọrụ na-eji oku olu, oku vidiyo, ozi ederede, mgbasa ozi, na faịlụ na nkata nzuzo ma ọ bụ akụkụ nke obodo a na-akpọ "sava." Discord dị na Windows, macOS na Linux Distros.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye onye ahịa Discord na Pop!_OS 20.04.
OS akwadoro: Pop! _OS 20.04 ma ọ bụ karịa.
Melite gi Pop! _OS 20.04 Sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị adị adịla ugbu a:
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na na-agbakwunye onye ọrụ na Sudoers na Pop!_OS.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa dabara adaba nke ebe nchekwa Pop_OS 20.04 nyere. Nke a bụ ụdị kwụsiri ike yana echekwara.
Mbụ, mee ihe ndị a dabara iwu wụnye:
sudo apt install discord
Ozugbo etinyere ya, kwado nrụnye ahụ site na ịlele apt-cache policy na Discord.
A na-edozi mmelite discord site na iji ọkọlọtọ dabara adaba & kwalite iwu na esịtidem n'ime ngwa.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Discord na APT, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
sudo apt autoremove discord --purge -y
Nke a ga-ewepụ ihe ndabere ọ bụla etinyere na mbụ na-akpaghị aka.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Snap. Ndị ọrụ Pop!_OS nwere ike mara Snap ka ọ na-emepụta ma na-elekọta ya site na Ubuntu; Agbanyeghị, etinyeghị ya na sistemụ gị. Agbanyeghị, enwere ike itinye nke a ngwa ngwa.
Na-esote, wụnye ngwugwu Discord site na iji snap:
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na arụnyere Discord nke ọma yana nọmba ụdị.
Ị ghaghị ịmalitegharị nnọkọ desktọpụ gị ma ọ bụrụ na akara ngosi ahụ efuola!
Ka ilele akara ngosi ngwa, ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esote.
Ileghara ihe dị n'elu anya ma ọ bụrụ na akara ngosi Discord dị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ahụhụ a nwere ike ime mgbe ị na-etinye ngwugwu ọhụrụ.
Ngwunye Snap dị oke mkpa karịa ebe nchekwa ọdịnala site na njikwa ngwugwu APT maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Otú ọ dị, ngwungwu a na-echekwa n'ụzọ kwụ ọtọ karịa nke a na-emelite ka ọ bụrụ ụdị kachasị ọhụrụ dịnụ.
Nhọrọ nke atọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Site na ndabara, Discord ka ejiri Pop!_OS 20.04 tinye ya belụsọ na i wepụrụ ya. Nke a bụ nhọrọ ọzọ ewu ewu dị ka Snap.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Debian jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
Ugbu a wụnye Discord site na iji iwu flatpak a:
Ọ ga-apụta ozugbo na-arịọ ka wụnye ya (onye ọrụ) ma ọ bụ usoro (mgbọrọgwụ). Ị ga-emecha mgbe niile họrọ nhọrọ 2.
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị, n'ozuzu n'ime nkeji iri mbụ.
Ka iji aka kwalite ngwungwu Flatpak, mee iwu a.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke Discord, gbaa iwu a:
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" iji Flatpack wepụ.
Ugbu a ị nwere onye ahịa Discord, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ abụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite Discord wee jiri ọdụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Discord. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Ugbu a mepee Discord, ị ga-abịa na ibe nbanye, ma mepụta akaụntụ ma ọ bụ jiri akaụntụ dị adị, nke ahụ bụ ya; ị tinyela Discord nke ọma na desktọpụ Pop!_OS gị.
Nkuzi a akọwapụtala otu esi etinye Discord site na snap, flatpack, ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ aha dabara adaba. Agbanyeghị, ngwungwu snap enweghị mmasị na ya, yabụ ebe nchekwa dabara adaba na flatpak maka ndabere ga-abụ ụzọ aga maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Discord bụ na ọ ga-abụ ọnụ ọgụgụ 1 ikpo okwu egwuregwu maka obodo dị n'ịntanetị maka afọ ndị na-abịa. Agbanyeghị, TeamSpeak kwadoro onwe ya na-alọghachi. Ọdịnihu ga-ekpebi ma Discord nwere ike idobe ọchịchị ya, nyere ihe gbasara nzuzo ụbọchị ndị a.
Categories Pop! _OS Tags Nsogbu, POP! _OS 20.04 Mail igodo
Otu esi etinye Slack na Pop!_OS 20.04